MirageOS 4.0 inouya nezvinhu zvitsva, maitiro matsva ekuvaka uye nezvimwe | Linux Addicts
MirageOS 4.0 inosvika nezvishandiso zvitsva, maitiro matsva ekuvaka nezvimwe
Mushure megore nehafu yekuvandudza kuvhurwa kwe iyo itsva vhezheni yeprojekti "Mirage OS 4.0" iyo inobvumira kugadzira masisitimu ekushanda kwechishandiso chimwe chete, umo iyo application inounzwa seyakazvimiririra "unikernel" iyo inogona kumhanya pasina kushandiswa kweanoshanda masisitimu, yakaparadzana OS kernel, uye chero akaturikidzana.
Yese yakaderera-level mashandiro anowanikwa kune inoshanda sisitimu anoitwa seraibhurari yakasungirirwa kune application.
1 Nezve MirageOS
2 Main nhau dzeMirageOS 4.0
app inogona kuvandudzwa pane chero sisitimu yekushandisa uye yobva yaunganidzwa kuita yakasarudzika kernel (iyo unikernel pfungwa) inogona kumhanya yakananga pamusoro peXen, KVM, BHyve uye VMM (OpenBSD) hypervisors, pamapuratifomu enhare, senge POSIX maitiro. inoenderana, kana munzvimbo dzemakore dzeAmazon Elastic Compute Cloud uye Google Compute Injini.
The yakagadzirwa zvakatipoteredza haina chinhu chakanyanyisa uye inopindirana zvakananga ne hypervisor pasina vatyairi kana masisitimu masisitimu, zvichitungamira kuderedzwa kukuru kwepamusoro uye nekuwedzera kuchengetedzeka.
Shanda neMirage OS Inodzika kusvika kumatanho matatu: gadzirira iyo gadziriso ine tsananguro yeOPAM mapakeji anoshandiswa munharaunda, kuvaka nharaunda uye tanga nharaunda. Iyo yekumhanyisa nguva yekumhanya pamusoro pe hypervisors yakavakirwa paSolo5 kernel.
Kunyangwe iyo maapplication nemaraibhurari akavakirwa pamutauro wepamusoro-level OCaml, nharaunda dzinobuda dzinoratidza kuita kwakanaka uye saizi shoma (semuenzaniso, iyo DNS server ingori 200 KB).
Kugadzirisa nharaunda zvakare zvakareruka, sezvo kana iwe uchida kuvandudza chirongwa kana kushandura dhizaini, zvakakwana kugadzira uye kumhanya nharaunda nyowani. Mazana akati wandei emaraibhurari mumutauro weOCaml anotsigirwa kuita network mashandiro (DNS, SSH, OpenFlow, HTTP, XMPP, Matrix, OpenVPN, nezvimwewo), shanda nekuchengetedza, uye nekupa data rakafanana kugadzirisa.
Main nhau dzeMirageOS 4.0
Mune iyi vhezheni itsva yeMirageOS inoratidzwa yakachinja chirongwa chekuvaka chirongwa uye unikernel. Pane kudaro yegadziriro yekuvaka ocamlbuild yakamboshandiswa, zvinoshandiswa dune nenzvimbo dzenzvimbo (monorepos).
Kugadzira matura akadaro, yakawedzera chishandiso chitsva, opam-monorepo, izvo zvakatibvumira kuparadzanisa manejimendi epakeji kubva pakuvaka kubva kunobva. Iyo opam-monorepo utility anoita basa rekugadzira mafaira ekukiya kune zvinoenderana neprojekiti, kudhawunirodha uye kubvisa iyo yekutsamira kodhi uye kugadzirisa nharaunda kushandisa dune kuvaka sisitimu, zvakakoshawo kutaura kuti iyo chaiyo kuvaka inoitwa nedune.
Imwe shanduko inomira pachena ndeyekuti nzira inodzokororwa yekuvaka inopihwa. Kushandiswa kwemafaira ekukiya inopa chinongedzo kune kutsamira shanduro uye inokubvumira kuti udzokorore zvachose maitiro ekuvaka chero nguva nekodhi imwechete.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo akaita imwe nzira itsva yekubatanidza uye kuyambuka-kuunganidza kugona kunopihwa kune ese anotsigirwa anotarirwa mapuratifomu kubva kune yakajairwa nharaunda yekuvaka, umo, pakati pezvimwe zvinhu, C-yakabatana maraibhurari uye zvinotsamira zvinosanganiswa, pasina chikonzero chekuwedzera izvi zvinongedzo kune huru package.
Kune rimwe divi, zvinotaurwa izvo iyo opam-monorepo utility iripo yekuiswa ine opam package maneja uye inogona kushandiswa mumapurojekiti anoshandisa dune kuvaka system. Kuchengetedza zvigamba zvinogadzirisa nyaya nekusikwa kwekutsamira mudune, matura maviri akagadzirwa dune-universe/opam-overlays uye dune-universe/mirage-opam-overlays, iyo inogoneswa nekusarudzika kana uchishandisa mirage CLI utility.
Of the dzimwe shanduko izvo zvinomira pachena:
Muchinjikwa-kuunganidza wakarongeka uchishandisa nzvimbo dzekushandira dzakapihwa neiyo dune kuvaka system.
Tsigiro yemapuratifomu matsva anotangwa akawedzerwa, semuenzaniso, kugona kugadzira zvimiro zvega zvekushanda paRaspberry Pi 4 mabhodhi kwave kuedzwa.
Basa rakaitwa kubatanidza zvikamu zveMirageOS mune ecosystems ine chekuita neOCaml budiriro kuti kurerutsa kuungana kwezvikumbiro muchimiro cheunikernel.
Mazhinji MirageOS mapakeji akaiswa kune dune kuvaka system.
Kubatanidzwa kwakareruka kweMirageOS neC uye Rust maraibhurari.
Nyowani OCaml yekumhanya nguva inokurudzirwa kudzivirira libc (libc yemahara).
Inopa kugona kushandisa iyo Merlin sevhisi yekubatanidza neyakajairwa yakabatanidzwa budiriro nharaunda.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » MirageOS 4.0 inosvika nezvishandiso zvitsva, maitiro matsva ekuvaka nezvimwe
Kukanganisa kwakawanda kwaonekwa muLinux Kernel
Kudhirowa, yakanakisa yakavhurika sosi imwe nzira kune Paint